Faritra 22 : Nivory mahakasika ny AICT -
AccueilSongandinaFaritra 22 : Nivory mahakasika ny AICT
Faritra 22 : Nivory mahakasika ny AICT
02/02/2018 admintriatra Songandina 0
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny FDL Anosy, ny fivorian’ireo lehiben’ny Faritra 22, izay tafiditra indrindra amin’ny Fivoriamben’ny Coopération Internationale des Collectivités Territoriales Malagasy et Françaises (AICT) andiany faharoa, niaraka tamin’ireo solontenan’ny komity mpandrindra.
Araka izany, ankoatra ireo fihaonana sy fifanakalozana izay tafiditra indrindra amin’ny fandaharan’asan’ny Fihaonambe, hotontosaina ny 5 -7 marsa 2018, ao amin’ny Carlton Anosy, dia hanatanteraka fampisehoana hanehoana ny mampiavaka azy amin’ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa amin’ireo solontenan’ny fitsinjaram-pahefana frantsay ireo Faritra 22.
Raha ny nambaran’ny lehiben’ny Faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary, dia tanjona ny hisian’ny fifanakalozana mba hijerena teboka iraisana hampiraisana ny fiaraha-miasa samy mahazo tombony. « Efa niara-niasa sahady tamin’ny Région Champagne-Ardenne any Frantsa ny Faritra Analamanga mba hanatsarana ny tontolon’ny fambolena any amin’iny distrikan’Ambohidratrimo iny. Voaporofo ihany koa izao ny fisian’ny fiaraha-miasa, ary mbola hanitatra izany amina sehatra hafa izahay », hoy ny lehiben’ny Faritra Analamanga.
Ankoatra izay, dia voalaza ihany koa fa kaominina sy faritra maro no efa misy fiaraha-miasa mivantana amin’ny fitsinjaram-pahefana frantsay. Toraka izany ny any amin’ny Faritra Anosy, izay mieritreritra ny hanavao ny fiaraha-miasany amin’ny Région de France sy La Réunion. « Mifototra indrindra amin’ny jono sy ny famokarana « huîtres » ireo fiaraha-miasa. Nisy fotoana io fiaraha-miasa io niato, ka hanavao izany no tanjonay amin’ny alalan’io fihaonambe manaraka ho avy io », hoy ny lehiben’ny Faritra Anosy Jules Etienne Razafindramaro.